पशुपालन फाप्यो अधिकारीलाई ! - ParyatanBazar.com
पशुपालन फाप्यो अधिकारीलाई !
वैशाख २९,काठमाडौं ।भानु नगरपालिका–१२ स्थित घलेछाप निवासी ५० वर्षीय राजेन्द्र अधिकारी बहराइनमा होटलको राम्रो जागिर छाडेर गाउँमै व्यावसायिक पशुपालनतर्फ लाग्नुभएको छ ।
शुरुमा करिब रु १५ लाखबाट व्यवसाय थाल्नुभएका अधिकारीले अहिले करिब रु ७० लाख लगानी भइसकेको बताउनुभयो । हाल उहाँका खोरमा ११७ वटा बाख्रा छन् ।
मिर्लुङ्ग बहुउद्देश्यीय कृषिफार्म प्रालि दर्ता गरी किसान अधिकारीले भैँसीपालन तथा तरकारी खेतीसमेत गर्ने योजना बनाउनुभएको छ । बोर जातको उन्नत बोकाबाट स्थानीय जातको बाख्रामा क्रस गराएर ब्याडका रूपमा बोका उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय जातको बाख्राको तुलनामा बोर जातको बाख्राको मासु दोब्बरले उत्पादन वृद्धि हुने हुँदा किसानले छोटो अवधिमा राम्रो मूल्य पाउन सक्नेछन् ।
शुरुशुरुमा प्रतिकिलो रु एक हजार १०० सम्म बिक्री गर्ने गरिए पनि अहिले रु आठ/नौ सयमा बिक्री गर्दै आएको किसान अधिकारी बताउनुहुन्छ । तीन महिनाको पाठापाठी १५ किलोभन्दा माथिका हुन्छन् । दूध छुटेपछि पनि करिब २० दिन पालेपछि बिक्री गर्न लायकका हुन्छन् ।